အဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းကို မပြဌာန်းနိုင်ရင် နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းက ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
ဒီ ဥပဒေပြဌာန်းနိုင်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေအတွက် ဥပဒေကြောင်းအရ အကာအကွယ်ပေးနိုင် မှာ ဖြစ်တာကြောင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ပြင်ဆင်ရေးဆွဲအတည်ပြုပေးဖို့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်ဇံမြင့်ကလည်း ဒီနေ့ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
“ဒီဥပဒေဟာဆိုရင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းများအတွက် ငွေးကြေး ဆိုင်ရာ အာမခံချက်တစ်ရပ် ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်ရဲ့ စီးပွားရေးစနစ် ပိုမိုတိုးတက် ခိုင်မာစေရန်အတွက် အထောက်အကူပြုတဲ့ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ပြုစုရေးဆွဲ ထားသော ဥပဒေဖြစ်ပါသဖြင့် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက် အတည်ပြုနိုင်ရေး တင်ပြအပ်ပါကြောင်းနဲ့ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါတယ်”
အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေကြမ်း နဲ့ ငွေကြေးခ၀ါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေကြမ်းတွေကို ဥပဒေအဖြစ် မပြဌာန်းနိုင်ရင် ငွေကြေးနဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ အရေးယူခံရနိုင်တာကြောင့် လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလ ပထမအပတ်မှာ နောက်ဆုံးထားပြီး ဥပဒေတွေအဖြစ် ပြဌာန်းပေးဖို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းဆီကို ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက စာရေးသားပေးပို့ထားပါတယ်။
ငွေကြေးခ၀ါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေကြမ်းကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်က လက်ခံဆွေးနွေးဖို့ ဒီနေ့ သဘောတူလိုက်ပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ သက်တမ်းတလျှောက်မှာ အလွန်ဆိုးဝါး ကြီးလေးတဲ့ ငွေကြေးခ၀ါချမှု
စစ်ကြောရေးမှာ အသက်သေတဲ့ အထိ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေဟာ ရာဇဝတ်ပြစ်မှုကြီးတွေပဲ။ စီးပွားရေး ပျက်စီးအောင်လုပ်တာ၊ နိုင်ငံရေး ပျက်စီးအောင်လုပ်တာ၊ တရားစီရင်ရေး ပျက်စီးအောင်လုပ်တာ။ အရပ်ပျက်ခရိုနီတွေလည်း တရားဥပဒေကို စိန်ခေါ်ဖို့ အဆင့်သင့်ဖြစ်နေတာ ဖွတ်အစိုးရရဲ့ ကိုင်တွယ်မှု အားနည်းချက်တွေကြောင့်ပါ။
နိုင်ငံတော်အတွက် အလုပ်လုပ်မယ့် စိတ်ရင်းနဲ့နှလုံးသား ဖြူစင် လူ မရှိ တာ ကျွန်ပ်တို့ပြည်သူတွေကတော့ သိပ်ရှက်တယ်။
Jan 23, 2014 01:48 AM
Pot calls the kettle black. He should send himself into the prison first. The funniest joke I have ever heard. No Brainer.